डेङ्गुका बिरामी बढेसँगै चितवनमा रगतको अभाव | News Polar
२१ भाद्र २०७६, शनिबार २०:०३
चितवनः डेङ्गुका बिरामी बढेसँगै जिल्लामा रगतको अभाव देखिएको छ । क्षेत्रीय रक्तसञ्चार केन्द्र भरतपुरका प्रमुख रमेशकान्त पौडेलका अनुसार नियमित रक्तदान नहुँदा डेङ्गु सङ्क्रमितलाई आवश्यक पर्ने सेतो रगत पु¥याउन कठिन भएको हो ।
अहिले दैनिक १०० युनिट सेतो रगतको माग रहेको बताउँदै उहाँले केन्द्रले ६० देखि ७० युनिट मात्रै उपलब्ध गराउन सकेको जानकारी दिनुभयो ।
सेतो रगतले प्लेटलेट निर्माणका लागि सहयोग गर्ने गर्दछ । डेङ्गु सङ्क्रमितलाई आवश्यक पर्ने सेतो रगत रक्तदान गरेको छ घण्टाभित्र बनाई सक्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा सभापति ज्ञानशाली न्यौपानेका अनुसार जिल्लामा नियमित रक्तदान नहुँदा बिरामीको मागअनुसार रगत दिन नसकिएको हो । पछिल्लो समय डेङ्गु सङ्क्रमित ८३३ पुगेपछि अझै थप समस्या देखिएको हो ।
न्यौपानेका अनुसार जिल्लामा सेतो रगतसँगै रातो रगतको पनि माग बढेको छ । जसका कारण नियमित रक्तदान गर्नका लागि सबैलाई आह्वान गरिएको छ । अहिले रातो रगतको माग दैनिक ७० युनिट रहेको भए पनि ५० युनिट मात्रै पु¥याउन सकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
केन्द्रले चितवन, गोर्खा, लमजुङ, तनहँुलगायतका १० जिल्लाबाट रगत सङ्कलनको काम गर्दै आएको छ । असार साउनमा खेती गर्ने समय भएकाले रगतको अभाव भए पनि अहिले बिरामीको चाप बढेसँगै रगत अभाव देखिएको न्यौपानेले बताउनुभयो ।
डेङ्गुका बिरामी बढेका कारण गाउँघरमा रक्तदानका कार्यक्रम पनि कम भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा वार्षिक ५० हजार युनिट रगतको माग हुँदै आएको छ । केन्द्रले ४० हजार युनिट रगत मात्रै पूरा गर्दै आएको छ ।
डेङ्गु प्रतिरोधी ब्याक्टेरिया‘वोल्बाचिया’ को प्रयोग गर्दै
कोलम्बो । श्रीलङ्काको सरकारले डेङ्गुलाई निर्मुल गर्नका लागि विशेष प्रकारको ब्याक्टेरियालाई प्रयोग गर्ने भएको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले बिहीबार श्रीलङ्काको…
हेटौँडा । गत साउन १० गते हेटौँडा अस्पतालका वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. हरि खड्कामा पहिलोपटक देखिएको डेङ्गु रोग भदौ मसान्तसम्म…
डेङ्गु आतङ्कः धुवाँउने विषादीको (फगिङ) प्रयोगले पनि मरेन लार्भा
काठमाडौं । पछिल्लो चार महिनामा डेंगु संक्रमणबाट सात जनाको मृत्यु भएको छ । ६२ जिल्लामा संक्रमण फैलिएको सरकारी तथ्यांक छ…
टोलटोलमा औषधि छर्कदै सांसद बस्नेत
काठमाडौं । मध्यपुरथिमि नगरपालिका–६ स्थित कमेरोटारका छ सामुदायिक संस्थालाई आज डेङ्गु नियन्त्रणसम्बन्धी औषधिसहित उपकरण हस्तान्तरण गरिएको छ । ‘हाम्रो प्रतिबद्धता…
विद्यालयमा डेङ्गु निषेध ! चलाउँदै रोकथाम अभियान
झापामा सयौ डेङ्गुका बिरामी
नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलले डेङ्गु रोगीहरुको लागि विशेष व्यवस्थापन गर्दै
कृषि मन्त्री खनाललाई डेंगु संक्रमण